CITE HARAS : Voasambotra i Vijo, jiolahy ikoizana
Mitohy ireo ezaka ataon’ny Fip Toamasina. Ny alahady 14 mey sy ny alatsinainy 15 mey, dia vokatra maromaro indray no azo. 17 mai 2017
Goavana amin’ireny ny fahatratrarana an’i Vijo, tovolahy 17 taona, lehiben’ny mpamaky trano sy mpanendaka ao Cité Haras. Tratra niaraka taminy koa ireo namany efa-dahy.
Vaky trano sy fanendahana no tena mampalaza an’i Vijo sy ny ekipany. Ireo mpamonjy lanonana ao amin’ny toeram-pandihizana, Paradise Ankirihiry sy Bar Willy, no tena lasibatra amin’izany. Marihina fa misy kilemaina ny naman’i Vijo tratra ireto. I Miherindraza izay kilemaina saingy eo amin’ny laharana lefitr’i Vijo (adjoint) no misy azy ary mandray anjara feno amin’ny fanendahana. Mampiasa basy kilalao sy fitaovana famakiana trano ary antsy maranitra izy ireo amin’izany.
Tovolahy iray ao monina Ankirihiry-Avaratra no maka ireo entana halatra. Mbola sarona tao amin’ny tranon’ity tovolahy ity ireo entana halatra mbola tsy lafo. Ankoatra an-dry Vijo, dia tarika mpanendaka manao andiany efatra ihany koa no sarona teto Toamasina. Tsy mijanona eto Toamasina ihany kosa ireto andiany ireto amin’ny fanaovana asa ratsy fa tonga hatreny amin’ny Lafaza lalam-pirenena faha-5
Ho an’ireo olona efa voaendaka teny amin’ny faritra voalaza ireo sy niharan’ny vaky trano, dia miantso azy ireo ny Kaomandàn’ny Fip Toamasina, Rafaliarivo Jules, mba hametraka fitoriana. Nomarihiny fa arakaraky ny vesatra iampangana an’ireo jiolahy sarona ireo no itazoman’ny Fitsarana azy ireo sy ahazoan’izy ireo sazy mafimafy kokoa.
Antetezambaro, mitohy ny asan’ny Fip. Ankoatra ireo vokatra azon’ny Fip teto Toamasina tampon-tanàna ireo, dia mitohy ny asa fametrahana fandriampahalemana maharitra ao Antetezambaro RN5. Mpamaky trano efatra mianadahy no sarona tany an-toerana.